FAQ - Ningbo Artmetal Products Co., Ltd
Izingxenye Deep ezidwetshwe
Deep ezidwetshwe Izingxenye LoMhlangano
Kuyini umdwebo ezijulile?
umdwebo Deep kuyinto uthayela ukwakha inqubo lapho nalutho uthayela is radially ukudonselwa die ukwakha by isenzo mechanical iyashaya. Inqubo kubhekwa "ezijulile" Umdwebo lapho wengxenye ungenisa ukujula idlula ubukhulu bayo
Yiziphi izinhlobo izinto ukwenza umsebenzi ARTMETAL nge?
Ngomdwebo ezijulile, ukukhetha impahla ebanzi kakhulu futhi cishe zonke izinsimbi commercial kusetshenzwe ayatholakala ishidi noma ikhoyili ifomu ngomdwebo ezijulile. Indaba esemqoka sisebenzisa kuyinto insimbi engagqwali 200-400 chungechunge. izinto Okunye CRS, i-HRS, aluminium, zethusi, ithusi ayatholakala, futhi.
Yiziphi ugqinsi impahla ARTMETAL umsebenzi nge?
0,1016 mm kuya 9,525 mm (004 "ukuze .375")
Yini tolerances kungaba ARTMETAL uyifinyelele?
Nge inhlanganisela kufa kanye machining yesibili singahlinzeka tolerances kuze kube .00254 mm (.0001 ")
Yiziphi ARTMETAL imisebenzi yesibili amakhono?
evunyelwe, imishini, Welding (TIG, I-MIG, indawo), ngenxa yokuntula, stud, standoff okufakiwe, riveting, inhlangano, electro-ezipholisha, ezipholisha mechanical (hairline, isibuko), powder enamathela, isihlabathi blasting, passivation, Plating
Ngingabakha kanjani ubuhlobo ikhotheshini?
Ungathumela RFQ kithi ngemigwalo nofana ngesiketjhi amasampula noma okusalungiswa nge ubuningi elilinganisiwe, njengembuyiselo sizonikela kuwe zingakapheli izinsuku ezingu 2 zokusebenza.
Yini imidwebo kungaba ARTMETAL umsebenzi nge?
JPG, PDF, DWG, DXF, ISINYATHELO, IGS, NJLL.
Kuyini kwemibandela yokukhokha le ARTMETAL sika?
Ngingayithola kanjani ukukhokha?
T / T, L / C, D / P, inyunyana entshonalanga, njll Sisebenzisa ukuhambisa nokungenisa ejenti ukwamukela ukukhokhelwa nokuthunyelwa imibhalo ikhishwa egameni agent ethu. Sisebenze namakhasimende bethu abaphesheya kwezilwandle eminyakeni (umsebenzi wethu oyinhloko is yokukhiqiza kanye bumbela).
Indlela Artmetal kungaba ikhwalithi?
Artmetal kuyinto ISO9001 eqinisekisiwe, ifakwe state-of-the-art imishini futhi has izisebenzi ezinekhono, ubunjiniyela ithimba abanolwazi ukuba zinakekele ngamunye Isinyathelo ukukhiqiza. Uma sinalo inkinga izinga, thina ayolungisa noma esikhundleni izimpahla noma ukubuyisela imali izinkokhelo zakho.